Safal Khabar - कोरोना भाइरस : खोप कहिले बन्ला ? खोप नबनेसम्म के उपचार ?
कोरोना भाइरस : खोप कहिले बन्ला ? खोप नबनेसम्म के उपचार ?
शुक्रबार, २३ फागुन २०७६, १६ : ०१
काठमाडौँ । नयाँ कोरोनाभाइरस विश्वभर ८० देशमा फैलिएको छ र प्रत्येक दिन हजारौँ नयाँ सङ्क्रमणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।
अहिलेसम्म कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट मानिसलाई बचाउने खोप बनेको छैन।
खोप कहिलेसम्म बन्ला त ?
यसको अर्थ सबैभन्दा छिटो खोप उपलब्ध हुने समय भनेको सन् २०२१ को बीचतिर मात्रै हो।
तर खोप विकासको सबै कुरा सहज नहुन सक्छ जसले यसलाई ढिलो बनाउन सक्छ। मानिसमा अहिले चार प्रकारको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण छ। सबैले रुघाखोकी लगाउँछ र हामीसँग कुनैको पनि खोप छैन।
खोप बनेपनि यो वृद्ध मानिसहरूमा कम सफल हुनेछ। यस्तो खोपका कारणले नभई वृद्ध मानिसहरूको रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हुने कारणले हो। सिटामोलसहित सबै औ‍षधिहरूको साइड इफेक्ट हुन्छ। तर खोपको परीक्षण राम्ररी नगरी यसको साइड इफेक्टहरूबारे थाहा हुन सक्दैन।
केही एन्टीभाइरल औषधिहरू परीक्षण भइरहेका छन् तर त्यो कहिले तयार हुन्छ भन्ने अहिल्यै भन्न सकिन्न। खोपले थोरै सङ्ख्यामा भाइरसलाई हाम्रो शरीरमा पठाउँछ जसले हाम्रो शरीरले त्योसँग लड्न सिक्छ। र त्यसपछि कुनै बेला त्यो भाइरस हाम्रो शरीरमा आयो भने शरीरलाई त्योसँग कसरी जुध्ने भन्ने थाहा हुन्छ।
खोपमा कमजोर बनाइएका भाइरसहरू प्रयोग गरिन्छ जसले शरीरमा पुरै सङ्क्रमण गर्न सक्दैनन्। तर नयाँ कोरोनाभाइरसको लागि खोप बनाउन वैज्ञानिकहरूले फरक विधि प्रयोग गरिरहेका छन्। यसको अनुवांशिक कोड थाहा भएको भएर वैज्ञानिकहरूले यो भाइरस ुनिर्माणु गर्न सक्छन्।
केही वैज्ञानिकहरूले कोरोनाभाइरसको कोडलाई अर्कै हानिरहित भाइरसमा हालेर परीक्षण गरिरहेका छन्। यदि यो विधि सफल भयो भने शरीरमा हानिरहित भाइरस पठाएर कोरोनाभाइरसविरुद्ध प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न सकिन्छ। अन्य वैज्ञानिकहरूले भने यसको डीएनएलाई प्रयोग गरेर शरीरमा भाइरल प्रोटिन बनाउने र शरीरको प्रतिरोधी क्षमता विस्तार गर्ने विधिमा खोप विकास गर्न खोजिरहेका छन्। बिबिसीको सहयोगमा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) ले कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वप्यापी रुपमा देखा परिरहेको बेला सरकारले आवश्यक...
चीनको वुहान सहरमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा...
कोरोनाबाट हङकङमा पनि एक जनाको मृत्यु, चीनमा मृत्यु हुनेको संख्या ४२५ पुग्यो
विश्वभर त्रास फैलाएको कोरोना भाइरसका कारण हङकङ...
उत्तरी छिमेकी चीनमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेपछि...